Mihasarotra hatrany ny misafidy ny fitaovana (na fitaovana) mety ho an'ny filantsika. Ho an'ny olona rehetra (toa ahy) manandrana mitantana kaonty marobe izay mikorontana sy mitabataba amin'ny SPAM sy ny fivarotana varotra, Agorapulse dia mamaky ny tabataba. Mba haharatsy azy kokoa, manova be ny tolotra sy ny maodelin'ny vidiny ireo mpivarotra fitaovana, mazàna mampiakatra ny vidiny na miakatra amin'ny serivisy tena mora ka hatramin'ny taha ambony amin'ny orinasa.
Influencers - Jereo ny anaran'ny mpandefa sy ny mombamomba azy isaky ny voatanisa. Manampia marika mety hanasokajiana ireo mpampiasa anao sy naoty anatiny mba hanomezanao ny teny manodidina ny ekipanao.
Filter - Mifantoha amin'ny zava-dehibe amin'ireo masontsivana fikarohana YouTube sy Twitter. Atsofohy amin'ny antsipirihany amin'ny alàlan'ny mpandraharaha boolean hahazoana izay tianao indrindra.
tatitra - Mamorona sy mizara mora foana ny topy maso sy antsitrika lalina ao anaty votoatin'ny mpanjifanao, ny firotsahany ary ny fitomboany. Mahazoa safidy an-taonany maro.